बीयर संग बीफ स्टू - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
बियर संग गोमांस स्टू
CARNES42 मिनेट2 व्यक्ति
केही हप्ता अघि हामी भ्यालेन्सियाको Oktoberfest मा थियौं। भन्नु पर्दैन, हामीले प्रशस्त विश्वको आनन्द उठाउँदै थियौं बियर... ताजा, यसको फोमको साथ र ती विशाल जगहरूमा सेवा गरियो !!
कुराकानीको क्रममा कतिजनालाई यो प्रश्न खडा भयो प्लेटहरू हामीलाई थाहा थियो कि बियरको साथ कसरी तयारी गर्ने… केहि प्रस्तावहरू बाहिर आए तर मेरो दिमागमा छक्क पर्दै, बीफ स्ट्यु बनाउने विचार अझै रह्यो।
सत्य यो हो कि, शरद ऋतु हप्ता पहिले प्रवेश गरे पनि, यहाँ हामी गर्मी संग जारी छ र हामी संग जारी छ। gazpacho, सलाद र हल्का भाँडाहरू तर, बिस्तारै, तपाईं मेनु परिवर्तन गर्न र सूप, क्रिमहरू लिन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, stews... यो प्रस्ताव संग तपाईं यो गिरावट आलस्य आउन प्रोत्साहित गरिएको छ कि छैन हेर्नका लागि!
कुनै पनि प्रकारको बियर यस नुस्खाको लागि मान्य छ। माल्ट वा जौ, गोरो, टोस्टेड वा कालो। यसले ससको रंग मात्र परिमार्जन गर्नेछ, यसलाई गाढा वा हल्का बनाउनेछ। मैले, यस पटक, प्रयोग गरेको छु गिनीज® र तपाईले प्लेटले कस्तो रंग लिएको छ हेर्नुहोस्।
म तपाईंलाई यो तयार गर्न प्रोत्साहन दिन्छु किनभने यो हो सरल, छिटो र यो शायद सामाग्री लिन्छ!
1 बियर संग गोमांस स्टू
तपाईं यो स्टू बनाउनको लागि आफ्नो मनपर्ने बियर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
रेसिपी प्रकार: CARNES
खाना पकाउने समय: 32M
कुल समय: 42M
अजमोदको १ स्प्रिग
Ped०० ग्राम काटिएको बीफ पकाउनको लागि
२ चम्मच सरसों
१०० मिलि बियर
खुर्सानी र नुन
मासु सिजन गर्नुहोस्। हामीले यसलाई फ्राइङ प्यानमा तेलसँग ब्राउन गर्छौं। हामी फिर्ता लिन्छौं र रिजर्भ गर्छौं।
प्याज छील्नुहोस् र गिलासमा राख्नुहोस्, चौथाईमा काट्नुहोस्। हामी अजमोद धोएर सुकाउँछौं। हामी सबै कुरा सँगै काट्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
मासुलाई खैरो बनाउन प्रयोग गरिएको तेल थप्नुहोस् र प्याज फ्राइ गर्नुहोस् Minutes मिनेट, º०º मा, गति १।
मासु र तोरी थप्नुहोस्, समयमा हलचल Seconds० सेकेन्ड, गति,, बाँया पालो।
हामी बियर थप्छौं र पकाउँछौं Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
समय पछि हामी मासु कोमल छ कि भनेर जाँच गर्छौं। यदि होइन भने, अर्को5मिनेटको समय तालिका बनाउनुहोस्।
चटनी कुच्न सकिन्छ, यसको लागि हामी सबै मासुलाई ट्रेमा हटाउँछौं जहाँ हामी यसलाई सेवा गर्न जाँदैछौं र यसलाई तातो राख्छौं।
हामी गिलास र कार्यक्रम बन्द गर्छौं १ मिनेट, to देखि speed गति। हामीले आरक्षित गरेको मासुमा सस खन्यायौं।
यस डिशको साथ हामी सामान्य फ्राइड आलुहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं तर हामी आफैंलाई स्याउ प्युरी पनि तयार गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं, जुन यो नुस्खाको साथ स्वादिष्ट हुन्छ।
ग्लुटेन-मुक्त बियर प्रयोग गरेर coeliacs को लागि उपयुक्त डिश।
थप जानकारी - गर्मी को लागी9विदेशी gazpachos
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: CARNES, Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » CARNES » बियर संग गोमांस स्टू
नमस्कार, मलाई लाग्छ कि यो एक धेरै रमाईलो नुस्खा हो र म यसलाई बनाउन चाहान्छु, तर म यो जान्न चाहन्छु कि यसलाई चार व्यक्तिको लागि बनाउने हो कि मैले दुबै पदार्थहरू र पकाउने समयमा दुब्लो बनाउनु पर्छ। मलाई तपाईंको ब्लग मन पर्छ र यो मेरो लागि धेरै उपयोगी छ। सबै कुराको लागि धन्यवाद।
Concha लाई जवाफ दिनुहोस्
People व्यक्तिको लागि नुस्खा बनाउनका लागि, व्यक्तिगत रूपमा, म अजमोदबाहेक अरू सबै सामग्रीहरू डबल गर्दछु, जसले केवल एक टहनी थप्छ, र तेल, जसले 4० g भन्दा बढी थप्दैन।
प्याजको शिकार गर्न केहि बेर लाग्नेछ, १० मिनेट।
र त्यसपछि, खाना पकाउने समयको लागि, म 35 and र minutes० मिनेटको बीचमा राख्छु।
म आशा गर्छु कि तपाईं खुशी हुनुहुनेछ र हामीलाई नतिजा बताउनुहुनेछ !!
के तपाईं पोर्कको लागि गाईको मासु परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
र्याकलाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि तपाईं पोर्कका लागि गोमांस परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ तर पकाउने समय कम हुनेछ!
तपाई हामीलाई आफ्नो नतिजा बताउनुहुन्छ, हैन? ; )
मलाई थाहा छ यदि तपाईं थोरै पानी थप्नुहुन्न भने, धन्यवाद
टेरेसालाई जवाफ दिनुहोस्
यस स्ट्युको अनुग्रह भनेको यो केवल बियरको साथ पकाइएको हुन्छ, पानी थप्न आवश्यक छैन। तपाईले देख्नुहुनेछ कि मासु चिप्लिएको र कोमल छ !!
मायरा, कस्तो राम्रो नुस्खा! के बच्चाहरूले यसलाई लिन सक्छन्?
तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि प्रत्येक बच्चा एक संसार हो !! तर चिन्ता नगर्नुहोस्, यो गर्मीको साथ झूट, गाढा बियर जस्तो देखिन्छ र अन्य सामग्रीहरूसँग मिसाउँदा यसको स्वाद परिवर्तन हुन्छ र त्यो विशेषता कटु समाप्त हुन रोक्दछ।
मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ!!
शरद forतु को लागी म्यारा एक धेरै रमाईलो नुस्खा हो कि यस बर्षले हामीलाई प्रतिरोध गर्दैछ ... मलाई गोमांस स्टूहरू मन पर्छ। म तपाईंको प्रयास गर्नेछु।
धेरै राम्रो, म यो नुस्खा बनाउन मनपराउँदछु, तपाईं मलाई सिफारिश गर्न सक्नुहुनेछ भाँडाको कुन अंश तपाईंले नुस्खा बनाउनु भएको हो। धन्यबाद।
हेर्नुहोला, जहाँ म तिमीलाई भन्न सक्दिन किनकि म कसाईको पसलमा गएकी थिइनँ, त्यो मेरो पति हो !!
के म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि चाल कहिल्यै विफल हुँदैन। तपाईको सामान्य कसाईमा जानुहोस् र उहाँलाई एउटा मासुको टुक्राको लागि सोध्नुहोस्, यो कोमल हुनुहोस्, कि तपाईं बच्चाहरूको लागि स्ट्यु पकाउँदै हुनुहुन्छ (यदि तपाईं बच्चाहरू पनि नभए पनि, यो नै भन्नुहोस् किनकि उनीहरूले सँधै उनीहरूलाई दिन्छन् सबै भन्दा राम्रो टुक्रा !!) ... यो कहिले असफल हुँदैन !! तपाईं एक महान स्टू हुनेछ !! ; )
मायरालाई जवाफ दिनुहोस्
विधि उत्तम छ, तर त्यो यदि तपाईंले अझै पनि यसलाई चिसो समाप्त नभएसम्म कम्तिमा केही दिनहरू राख्नु पर्छ। बियरको साथ, कुनै पनि स्ट्यु महान छ!
पकाउँदा प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कस्तो हेर! म यसलाई सेबसको साथ चाहन्छु, तर ... म यो कसरी गर्ने? मायरा, के तपाई हामीलाई नुस्खा दिन सक्नुहुन्छ? कृपया! अग्रिम धन्यवाद!
ओल्लालालाई जवाफ दिनुहोस्
उम्म ... तपाईंले उत्तम साथीलाई हेर्नको लागि केहि दिन पर्खनु पर्नेछ !!
उत्तम नुस्खा, म भाँडाका साथ केहि देख्न चाहान्छु कि त्यहाँ धेरै छैन।
Carlamad लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई मनपर्ने यो ब्लग को लागी धन्यवाद!
तर एउटा शंका - जब म भाँडा पकाउँदछु, म यसलाई करीव उमाल्नु पर्छ। १ घण्टा र आधा यो नरम नभएसम्म के तपाईं २ 1 मिनेट मात्र बाँकी हुनुहुन्छ? मैले देखें कि कसैले 25 35-40० मिनेट सिफारिश गरे पनि यो मलाई अलि कम देखिन्छ। कृपया तपाईको राय जान्न चाहानुहुन्छ।
Catarina लाई जवाफ दिनुहोस्
खाना पकाउने समय तपाईं तयार गर्न लाग्नु भएको मात्रा र तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने मासुको प्रकारमा केही निर्भर गर्दछ। विशेष रूपमा, recipe०० ग्राम भील सहितको यो नुस्खा करीव २ 300 मिनेटमा बनाईएको थियो र परिणाम पकाइएको मासु तर पूरै थियो (फोटोमा देखिए अनुसार)।
म आशा गर्दछु कि यो टिप्पणीले तपाईलाई मद्दत गर्दछ र अगाडि बढ्नुहोस् र यसलाई तयार पार्नुहोस् !!
मैले हिसाब हिजो बनाए र यो सफल भयो! धन्यवाद! केवल चीज यो हो कि यसमा 500०० ग्राम मासु थियो र मैले यसलाई minutes० मिनेट पकाउन छोडेको छ। ताकि यो अधिक कोमल छ। म यो निश्चित रूपमा फेरि दोहोर्याउनेछु!
Valerie लाई जवाफ दिनुहोस्
कद्दू र ब्री पनीर संग अण्डा रिबन
आधारभूत नुस्खा: रास्पबेरी coulis